Afrobasket Men: resin’i Madagasikara i Zimbaboe | NewsMada
Afrobasket Men: resin’i Madagasikara i Zimbaboe
Tsara fiditra ny ekipam-pirenena malagasy, lehilahy, eo amin’ny fiadian-toerana amin’ny «Afrobasket 2021». Avy hatrany dia nandresy an’i Zimbaboe, mpampiantrano ry zalahy. Hiatrika an’i Zambia, indray izy ireo, anio.
Nanomboka omaly tatsy Harare, renivohitr’i Zimbaboe, ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny «Afrobasket 2021», sokajy «E» lehilahy, ho an’ny faritra faha-6 sy faha-7. Tsara fanombohana ny ekipam-pirenena malagasy satria avy hatrany dia nandresy an’i Zimbaboe, mpampiantrano, tamin’ny isa 74 no ho 57.
Niady ny fihaonana satria tsy nihafihafy mihitsy ry zareo mpampiantrano fa avy hatrany dia nanindry sy nanery ny mpilalao malagasy, na teo amin’ny fanafihana na teo amin’ny fiarovantena. Nanan-tombo teo amin’ny halehiben’ny vatana rahateo, ry zareo. Araka izany, nitarika an’isa ny Zimbaboeanina, teo amin’ny folo minitra voalohany. 19 no ho 13 no nisarahan’ny roa tonta. Hita ho nikoropaka ihany ny mpilalao malagasy, tamin’izany satria nanarinary baolina be loatra.
Nanova paikady ny Malagasy teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Noezahina tsy hitazom-baolina ela loatra. Nohafainganina ny tolotra, notarihin-dry Livio sy ry Elly ary i Rija, ka nahitam-bokany izany. Tratran’ny Malagasy ny isa teny amin’ny solaitrabe ary nihoarany mihitsy izany, avy eo. Minitra fahadimy nilalaovana teo amin’ny tapa-potoana faharoa, dia efa nitarika tamin’ny isa 28 no ho 25 ny Malagasy. Tsy nijanona intsony izany satria 33 no ho 24 no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nifanenjehana hatrany ny isa teo amin’ireo tapa-potoana roa farany, saingy hain’ny Malagasy ny nitazona ny tombonisa efa azony.
Hikatroka amin’i Zambia, indray ny Malagasy amin’ity anio ity, eo amin’ny andro faharoa. Marihina fa tsy misy afa-tsy firenena telo ihany no miady ny tapakila hiakarana amin’ny dingana manaraka dia i Madagasikara, i Zimbaboe ary i Zambia. Natao lalao mandroso sy miverina, araka izany ity fifanintsanana, ity.